Ngwaahịa akwa - Quanzhou Omi n'uwe Co., Ltd.
Izizi, hapụ ịkọwapụta nnukwu ọdịiche dị n'etiti ịhọrọ akwa gị site na ebuka anyị ma ọ bụ site na akwa ndị a na-ahụ anya.
1, - Ebuka akwa bụ otu ihe ahụ dị ka akwa omenala, mana obere nhọrọ. Enwere ike ịhọrọ ha n'ime ihe mebere na agba ma ha abụghị nke fọdụrụ. a ga-eziga ya ozugbo n'ụlọ nkwakọba ihe anyị. Site na PO ọ bụla anyị na-amalite igbutu ozugbo anyị nwetara nkwụnye ego gị.
2, - akwa omenala, ị nwere ike ekenye ndị mejupụtara, agba, agba ngwa ngwa, ibu ibu, ọrụ, recycled, wdg, ọ na-emekarị na-ewe ihe karịrị 5 izu, ebuka akwa dị mkpa 2-3 izu, ọ dịghị mkpa ka confrim ọtụtụ nkọwa, oge akọwapụtara na-adabere na oke.
Ngwa ngwa na ahịa
Brandsdị mmalite ma ọ bụ ndị na-ahọrọ ịtụ obere na ọtụtụ mgbe, ga-ahụ ịnye iwu site na ebuka ịbụ isi ihe na-eto eto. Mere dị mfe.
Re-iwu na ọtụtụ ndị nrụpụta ga-ewe ọ dịkarịa ala ọnwa abụọ iji mee. Ebumnuche anyị mepụtara iwu niile na-eji akwa ngwaahịa naanị izu ise. Nke ahụ bụ ọsọ ọkụ nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị na-azụ ahịa enweghị ike ịnye. Na-eche ọnwa maka a top-elu nwere ike ịbụ ọnwụ nke a ika na-efu atọ ndị yiri nkata, ekwekọghị, na agba ma ọ bụ nha na-ere & hụ gị ahịa akpụ akpụ ndị ọzọ ụdị ịzụta ha na ngwaahịa si.
Ka ị na-etolite & wulite ọnụ ọgụgụ dị mma nke ndị na-eso ụzọ, ị ga-enwe ike ịhazi atụmatụ PO na-esote gị & jiri iwu ndị ị chọrọ ka anyị wee nwee oge ọ bụla ga - efu na mmepụta akwa.
Anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ na ụdị anyị & nyere ha aka ịhazi atụmatụ iwu ma ọ bụ elu elu & mee ihe dị njikere & kwadebere ka ọ bụrụ na iwu ahụ ga-abata, anyị niile ga-aga ụbọchị e debere iwu ahụ.
1. Oge ọ bụla ga - ahụ agba ọhụụ na - abịa n’omume; ya mere, a na-emelite agba agba kwa ọnwa isii.
2. Ọ bụrụ na ị rịọ akwa na ngwaahịa adịghị, biko mee ka anyị mara, anyị ga-achọ otu ma ọ bụ yiri.
Uwe akwa na agba na usoro
N'okpuru ebe anyị depụtara ọtụtụ akwa, larịị agba ma ọ bụ tie dai ma ọ bụ dijitalụ ebipụta ụkpụrụ ka ị na-ezo aka. Nke a na - eme ka obi sie gị ike na ụdị akwa ndị etinyegoro na uwe gị na-arụ ọrụ ga-abụ ọkwa kacha elu n'ụwa niile na Lululemon, ọ bụrụgodi na ọ ka mma ịmị mmiri, mkpakọ na njiri ahụ. Ha abụọ nwere ike ịnye iwu larịị & ebipụta.